Duulimaadyada Doha ku socda Madiina, Sacuudi Carabiya ee Qatar Airways hadda
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Airlines » Duulimaadyada Doha ku socda Madiina, Sacuudi Carabiya ee Qatar Airways hadda
Airlines • Airport • Aviation • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Dadka • Wararka Qadar • Dib-u-dhiska • Waajib ah • Sacuudi Carabiya Warka • Dalxiiska • Gaadiidka • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Warka Safarka Safarka
Dib -u -bilaabista adeegyadu waxay u oggolaan doontaa rakaabka ka duulaya iyo Madiina inay ku raaxaystaan ​​isku -xirnaan aan kala go 'lahayn in ka badan 140 goobood oo ah shabakadda ballaadhan ee diyaaradda ee Aasiya, Afrika, Yurub iyo Ameerika iyagoo sii maraya Madaarka Caalamiga ah ee Doha Hamad.
Duulimaadyada Qatar Airways waxaa maamuli doonta Airbus A320 oo bixineysa 12 kursi oo Heerka Koowaad ah iyo 132 Kursi oo Heerka Dhaqaalaha ah.
Rakaabka ka duulaya Madiina ayaa ka faa'iideysan doona shabakadda ballaaran ee caalamiga ah ee diyaaradda ee ku baahsan Aasiya, Afrika, Yurub iyo Ameerika.
Diyaaradda qaranka ee Dowladda Qatar ayaa sii waddo dib -u -dhiska shabakadeeda, oo hadda taagan in ka badan 140 goobood.
Qatar Airways waxay ku faraxsan tahay inay ku dhawaaqdo inay dib u bilaabi doonto adeegyadii Garoonka Caalamiga ah ee Amiir Maxamed Bin Cabdulcasiis, Madiina laga bilaabo 1 -da Oktoobar 2021 iyadoo la raaci doono afar duulimaad oo toddobaadle ah. Adeegyada Madiina waxaa maamuli doonta Airbus A320 oo ah mid casri ah oo ay ku jirto 12 kursi Heerka Koowaad iyo 132 kursi oo Heerka Dhaqaalaha ah.
Dib -u -bilaabidda adeegyadu waxay u oggolaan doontaa rakaabka ka duulaya iyo Madiina inay ku raaxaystaan ​​isku -xirnaan aan kala go 'lahayn in ka badan 140 goobood oo ah shabakadda ballaadhan ee diyaaradda ee Aasiya, Afrika, Yurub iyo Ameerika iyagoo sii mara Doha. Madaarka Caalamiga ah ee Hamad.
Qatar Airways duulimaadka QR 1174, ayaa ka bixi doona Madaarka Caalamiga ah ee Hamad saacadu markay tahay 01:00, oo imanaya 03:15 ilaa gegida diyaaradaha ee Amiir Mohammed Bin Abdulaziz. Duulimaadka Qadar Airways QR1175, wuxuu ka duuli doonaa garoonka caalamiga ah ee Amiir Mohammed Bin Abdulaziz 04:15, wuxuuna imaan doonaa garoonka caalamiga ah ee Hamad 06:25.
Diyaaradda qaranka ee Dowladda Qatar ayaa sii waddo dib -u -dhiska shabakadeeda, oo hadda taagan in ka badan 140 goobood. Qatar Airways sidoo kale waxay leedahay siyaasado ballansasho oo dabacsan oo bixiya isbaddallo aan xadidnayn ee taariikhaha safarka iyo meelaha loo safro, iyo lacag-celin lacag-la’aan ah dhammaan tigidhada la siiyay safarka la dhammaystiray 31 May 2022.
Isniinta, Arbacada, Jimcaha, iyo Axadda (mar walba maxalliga ah)
Doha (DOH) ilaa Madiina (MED) QR1174 waxay tagaysaa: 01:00 ayaa imanaya: 03:15
Madiina (MED) ilaa Doha (DOH) QR1175 waxay baxaysaa: 04:15 waxay timaadaa: 06:25